Dowlada South Korea oo Safiir u soo magacaawday Soomaaliya
Muqdisho:-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xassan Sh. Maxamud ayaa maanta Villa Soomaaliya ku soo dhaweeyay Safiirka cusub ay dowladda South Korea u soo magaacwday Soomaaliya Mudane Kim Chan-Woo si uu ugudbiyo warqadaha aqoonsinga ee Safiirnimo.Waxaa kulanka ku wehliyay Madaxweynaha Wasiir ku Xigeenka Arimaha Dibadda Mudane Jamal Barrow
Safiirka Cusub oo si wanaagsan loogu soo dhaweeyay Madaxtooyadda ayaa kulan gaaban la qaatay Madaxweynaha. Waxaana war bixin laga siiyay Lixda Tiir Siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya iyo in laga sugayo dowladda South Korea in ay ka qeyb qaadato dib-u dhiska dalka.” Amniga ayaa noogu muhiimsan horumar badana waan ka gaarnay dhanka amniga. Waxaan u baahanahay in aan sii wadno horumarinta amniga. Dal kaligii kasoo baxay bur-bur ma jiro ayada oon beesha caalamka saacidin.” Sidaa waxaa yiri madaxweynaha JFS Mudane Xasan Sheikh Maxamuud.
“Dowladda Soomaaliya mar walba diyaar ayey idiin tahay. Waxaa naga go’an in aan xiriirkeena ku aadan South Korea aan wanaajino.”
Madaxweynaha ayaa wuxuu ku soo gaba-gabeeyay “ Faqriga ayaa wuxuu aas aas u yahay xag-jirnimadda wax badan waan qabanay, laakin weli Soomaaliya waxey u baahan tahay kaalmo xagga dibadda ah.” Madaxweynaha ayaa wuxuu ku celiyay in Lixda Tiir ay muhiim yihiin madaama amniga,cadaaladda, dhaqaalaha shacabka, iyo horumarka dalka uu xooga saarayo.